737 winglets 1 months ago7တစ်နှစ် #1302
သင် dual-winglet / sharklets (တက်ဆင်းတောင်ပံအစွန်အဖျား) ကို 737 အထုပ်အပေါ် add တစ်ခုသို့မဟုတ် 737 max ကိုလုပ်နိုင်ကြောင်းမည်သည့်အခွင့်အလမ်း။ တကယ်အတွေ့အကြုံအများကြီးအေးစေမလား!
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: jervan, Sea7212
737 winglets 1 months ago6တစ်နှစ် #1320
ငါသည်ဤ၎င်းတို့၏ B737 Ng ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. iFly နှင့်အတူရှိခဲ့ကွောငျးဆှေးနှေးမှုမှာတော့သူတို့ 2020 အတွက်သူတို့ B737 MAX မိတ်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှခြေ။
737 winglets 1 months ago6တစ်နှစ် #1322
ကြောင်း payware ပါသလဲ
737 winglets 1 months ago6တစ်နှစ် #1323
ဟုတ်ကဲ့ iFly ဟာ payware ပါ။ ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်။ Naval Aviator တစ်ယောက်အနေနဲ့ငါ P-3 နဲ့ C-9 Variants ကိုပျံသန်းခဲ့ပြီး iFly payware ဟာအအေးမိခြင်းနှင့်လေယာဉ်၏ထူးခြားချက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ကျကျအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ပိုက်ဆံကောင်းတယ်။
737 winglets 1 months ago5တစ်နှစ် #1347
သငျသညျ iFly သည်ကောင်းထင်လျှင် .... သင် PMDG ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်
ခွင့်ပြုသူတို့စျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်တိုင်းရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးရှိ! ငါပျံသန်းတစ်ခုတည်းသော 737, 747 နှင့် 777 PMDG များမှာ
0.246 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်